Engineering in Medical / Hospital in Yangon
Assistant Engineer - For Medical Department (Only Male)
Good Personality, Communication Skill
Group Manager မှ ရေးဆွဲထားသော Service / Installation/ Customer Complaint များအား Schedule အတိုင်း Service Engineer နှင့်အတူ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အစည်းဝေးများ၊ နည်းပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ သင်တန်းများ နှင့် သရုပ်ပြပွဲများတွင် ပါဝင် ကူညီပေးခြင်း။
မိမိတာဝန်ယူထားသော ဌာနများ၏လုပ်ငန်းများ/ လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများအား အချိန်မီပြီးမြောက်စေရန် ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ အခြားဌာနများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
မိမိအားပေးအပ်ထားသော လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ (task assignment) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ တိုးတက်မှု၊ ပြီးစီးမှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြန်လည်သတင်းပို့ခြင်း။
မိမိတာဝန်ယူထားသောလုပ်ငန်းတွင် ထားရှိရမည့် မှတ်တမ်းများ ( Report, Documentation, Data, Record, Correspondence, etc..,) အား ချမှတ်ထားသောစနစ်နှင့်အညီ ပြုစုခြင်း၊စနစ်တကျUpdate ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ မိမိဌာနနှင့် ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ/ လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများအား တာဝန်ပေးအပ်ပါက ဆောင်ရွက်ခြင်း။
Age 20 -30 Years.
BE (EP,EC) /B-Tech(EC,EP) / B.Sc ( Phys ).
experience related in Electronic Engineering.
Minimum (1) years Experience of Medical Devices.
Leadership Skill ,General Management Skill, Financial Management skill.
Must be able to Travel Local and Oversea.
Good communication and interpersonal presentation skill.
Above average IT Skill.
Clinical or Biomedical Experience will be advantages.
Can do long term service.